Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
Otu esi etinye Snap & Snap-Store (Snapcraft) na openSUSE Leap 15
October 28, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Snapcraft (Snapd)
Otu esi eji Snapcraft (Snapd)
Otu esi ewepu Snap (Site na openSUSE Leap 15)
Site na ndabara, openSUSE anaghị abịa na Snap ma ọ bụ Snap Store arụnyere n'ihi na nke a bụ njirimara nke Canonical wuru dị ka ụzọ dị ngwa ma dị mfe iji nweta ụdị ngwanrọ kachasị ọhụrụ. Ubuntu Sistemu, yana ngwungwu Snap arụnyere site na sava etiti SNAP nke Canonical na-arụ.
Enwere ike itinye Snap yana, maka ọtụtụ akụkụ, jiri ọtụtụ ngwugwu rụọ ọrụ dabereSUSE Sistemu na-akwado nke ọma ugbu a. Enwere esemokwu ole na ole nwere ngwugwu akọwapụtara. Okwu na snaps VS zypper ngwugwu njikwa bụ na Snaps na-ejide onwe ya, na-eme ka .snap na-abawanye n'ihi inwe ihe ndabere ya niile gụnyere na ogo dị iche iche nke obere mmebi arụmọrụ ma e jiri ya tụnyere ngwa ala arụnyere. N'ụzọ dị iche, zypper dị ọkụ karịa nkesa ọnyà ya n'ihi na ọ dịghị mkpa ijikọta ndabere.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye Snapcraft ma nwee ike iji njirimara a na-aga n'ihu na openSUSE Leap 15.
Iji wụnye Snap, ị ga-ebu ụzọ bubata ebe nchekwa nchekwa maka ụdị openSUSE Leap gị. Ụfọdụ ihe atụ dị n'okpuru.
Bubata ebe nchekwa ngwa ngwa maka openSUSE 15.2:
Bubata ebe nchekwa ngwa ngwa maka openSUSE 15.3:
Nke a ga-agbanwe. Otú ọ dị, dochie 15 x na nọmba ụdị ọhụrụ n'oge, ọ dị mfe otú ahụ.
Ugbu a bubata igodo GPG achọrọ:
Site na ebe nchekwa na igodo GPG agbakwunyere, megharịa cache ka ịtinye ebe nchekwa ọhụrụ ahụ.
Na-esote, wụnye ngwugwu snapd na openSUSE:
Ozugbo etinyere Snap, achọrọ ka ịmalitegharịa sistemụ gị.
Mgbe ịlaghachiri na sistemụ gị, malite ọrụ snapd wee mee ka mmalite akpaaka.
Mgbe ị na-etinye Snap na nke mbụ, a na-adụ ọdụ ka ịwụnye faịlụ ndị bụ isi iji zere nsogbu ndị na-emegiderịta onwe ha:
N'oge na-adịghị mma, akara ngosi ngwa enweghị ike ịpụta na mmemme > gosi ngwa menu. Malitegharịa ekwentị ahụ ka nke a na-edozi ọtụtụ ahụhụ ndị a ma ọ bụrụ na ha emee.
Mgbe itinyechara Snap na sistemu Leap openSUSE gị, ị nwere nhọrọ iji wụnye ụlọ ahịa Snapcraft, nke na-eji UI eserese nke nwere ike ịmasị mma ma dị mfe ịchọ ngwugwu. Nke a bụ nhọrọ kpamkpam, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye, gbanye iwu a:
Ozugbo emepere, ị ga-echere ọtụtụ sekọnd ka ị na-ebudata cache Store Snap.
Iji wepu Snap na sistemu gị, mee iwu a:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye na openSUSE Canonical's Snap system wee wụnye, melite, ma wepụ ngwugwu.
N'ozuzu, mmegharị nke iji ngwugwu Snap yiri ka ọ na-ekewa ndị ọrụ n'etiti. Ọtụtụ sysadmins na ndị ọrụ ike agaghị emetụ Snaps aka; Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọrụ desktọpụ na ndị nkịtị na-enwe obi ụtọ nke ịwụnye na inwe ngwugwu emelitere ma ghara ichebara bloat na oghere. Nyere ka nnukwu draịva SSD siri bụrụ ụbọchị ndị a, ihe dị iche dị obere ma ọ bụrụ na ị nwere oke akụrụngwa dịka ihe nkesa mmepụta. N'agbanyeghị nke ahụ, n'ihi ịnọ n'ime akpa dị iche, Snaps nwere ike iji nwayọọ na-arụ ọrụ karịa ngwa arụnyere na ala site na zypper.
Ndị ọrụ ụlọ na-ahụta ịwụnye ngwa siri ike na openSUSE ma ọ bụ ọbụna iji Flatpack kwesịrị ịlele Snap iji chekwaa oge na nkụda mmụọ mgbe ị na-amụ usoro. Ọ bụ usoro dị mfe nghọta.
Categories openSUSE Tags megheSUSE Leap 15, Mkpochi.io Mail igodo
Otu esi etinye Elasticsearch na openSUSE Leap 15